Window Screen - China Hebei Samsung Metal wocingo
Screen Window Intshayelelo A window screen, isinambuzane screen okanye ukubhabha sikrini ucingo otyhidiweyo, fiberglass, okanye ezinye umnatha ifayibha zokwenziwa, wolula kwisakhelo ngomthi okanye ngentsimbi, eyenzelwe ukuba agubungele ukuvulwa i window ezivulekileyo. Injongo yalo ephambili ukugcina amagqabi, ubutyobo, izinambuzane, iintaka, kunye nezinye izilwanyana ukungena kwisakhiwo okanye isakhiwo zahlolwa ezifana nevaranda, lo gama evumela fresh air-flow. izindlu ezininzi eOstreliya, eUnited States naseKhanada baye screens kuzo zonke iifestile operable, whic ...
FOB Price: US $ 0,35 - 0,55 / Square Meter
Min.Order Ubungakanani: 1 Roll / Rolls
Supply Amandla: 1000 Qengqela / Rolls Usuku nganye
A window screen, isinambuzane screen okanye ukubhabha sikrini ucingo otyhidiweyo, fiberglass, okanye ezinye umnatha ifayibha zokwenziwa, wolula kwisakhelo ngomthi okanye ngentsimbi, eyenzelwe ukuba agubungele ukuvulwa i window ezivulekileyo. Injongo yalo ephambili ukugcina amagqabi, ubutyobo, izinambuzane, iintaka, kunye nezinye izilwanyana ukungena kwisakhiwo okanye isakhiwo zahlolwa ezifana nevaranda, lo gama evumela fresh air-flow. Izindlu ezininzi eOstreliya, eUnited States naseKhanada baye screens kuzo zonke ii window operable, nto leyo eluncedo kakhulu kwiindawo zinabemi iingcongconi enkulu. Ngaphambili, screens e North America zazidla indawo kunye iifestile iglasi ovuthuzayo ebusika, kodwa ngoku imisebenzi amabini adla ezidityanisiweyo indibanisela vungu screen windows, nto leyo evumela iglasi kunye screen panels sehla phezulu naphantsi.
Izinto ezininzi ezisetyenziswayo eziqhelekilyo izinto yokhuselo izinambuzane ezi aluminiyam kwaye fiberglass. Aluminium window screen ifumaneka ngokubanzi aluminium zendalo okanye namalahle umbala isicelo; zamalahle lingaphantsi ibonakala kakhulu. Fibreglass ifumaneka gray okhanyayo kwakunye imibala namalahle, amalahle kwakhona ezifundisa ukubukela ngcono nenkangeleko. Fiberglass ibiza ngaphantsi, kwaye ke ukugqithisela ukuba "denting" xa hit okanye wamqhuba. Noko ke, umnatha fiberglass thile ngaphaya kwawo ngaphezu aluminiyam enemingxuma, nto leyo mnyama imbonakalo yangaphandle ye window kwaye yehlise ubungakanani bokukhanya sivela ngaphandle. Ukongeza, fiberglass screen isidima ngokukhawuleza nangokuvela ekukhanyeni UV, oya kuyo fraying uqhekeza emva nje kweminyaka embalwa, ngokungafaniyo aluminiyam kuhleliyo kakhulu elide.
Kuba izicelo ezifuna amandla enkulu, ezifana iingcango zihlolwa, nenayiloni kunye ipholiyesta nokuxilongwa nazo ziyafumaneka.
Bronze isinambuzane ukuhlolwa ibiza kakhulu ngakumbi, kodwa inika inkonzo ixesha elide kakhulu kunokuba nokuba alumuniyam okanye fiberglass. Xa kuqala ngokufaka window ikhusi, inombala ngegolide eqaqambileyo; oku weathers ukuba zamalahle emnyama avulekile kwisithuba sonyaka okanye ngaphantsi. Bronze thile ziyamelana denting ngaphezu aluminum. Ngaphantsi amalaphu aqhelekileyo screen ziquka nobhedu, ubhedu, intsimbi engatyiwa, nensimbi kwalenza.
Ukongeza yenqubo zizinambuzane, iintlobo luthe leskrini kwakhona ukunciphisa kwelanga kunye inzuzo ubushushu ziyafumaneka. Zinika ebalulekileyo yokonga amandla enokubakho kwimozulu eshushu.
Yenza-it-ngokwakho iikiti screen kunye isakhelo replacement zifumaneka ngokubanzi kwiivenkile zeentsimbi kunye nokuphuculwa ekhaya. Ezi izakhelo zidla akhiwa amacala ngqo aluminiyam (leyo kunqunyulwa nobungakanani) kunye ezifakelwa kwikona zeplastiki. Iikiti Screen replacement lidla ngokuba umqulu wenayiloni zokuhlola ilaphu kunye nokubonelelwa onesisa iirubber spline.
Previous: Fibreglass Plain zazenziwe Wire elenze i
Okulandelayo: Staninless Steel wocingo
8x8 zazenziwe Wire Screen
ngesinyithi Screen Iron Window
Stainless Screen wocingo
Alubi Wire Screen
Construction nylon Panel
Welding Panel-Hot-Dip enemingxuma ngesinyithi Afte ...